Izindaba - Ukuvikela Impahla Yokusungula-Umthwalo Wethu Ojwayelekile
Ukuvikela Impahla Engqondo-Isibopho Sethu Esivamile
Njengoba ukuvikelwa kwamalungelo empahla yengqondo kuqhubeka nokwanda, izinkampani eziningi zibeke amalungelo empahla yengqondo ezindaweni zazo zamasu okuyisisekelo. Kwimpahla yengqondo, ukubaluleka kwezimpawu zokuhweba kumabhizinisi kuyaziveza. Uphawu lokuhweba olunedumela eliphakeme ngokusobala lungaletha inzuzo ethe xaxa ebhizinisini. Kodwa-ke, izinkampani eziningi zintula ukwakheka kophawu lokuhweba kanye nohlelo lokuphatha oluphelele. Uma ufuna izimpawu zokuhweba zisebenzele kangcono amabhizinisi, udinga ukunaka lezi zici ezilandelayo lapho uqhuba ukuphathwa kophawu lwangaphakathi lwangaphakathi:
Ukwakhiwa nokusetshenziswa kwecebo lokuhweba
Ukubaluleka kwecebo lokubhalisa uphawu
Ukusetshenziswa kwansuku zonke nokuphathwa kwezimpawu zokuthengisa
Hlela izenzo zokuvikela amalungelo ngokuya ngecebo lokuhweba
Ukuphathwa kophawu lokuhweba okuhlelekile noluphelele akulula kumabhizinisi. Amabhizinisi kufanele azakhele uhlelo lokulawulwa kophawu lokuhweba olufanele wona ngesisekelo sokuqonda ngokugcwele izici nokuqondiswa kokuthuthuka kwemikhiqizo / izinsizakalo zabo nangaphansi kokuholwa yimibono yobungcweti. Kungale ndlela kuphela lapho bengakwazi ukuzivumelanisa nezidingo zomncintiswano wemakethe futhi ngokuqhubekayo bandise isabelo semakethe nokwazisa ngomkhiqizo.
Ngemuva kweminyaka engaphezu kwemibili yokusebenza kanzima, uphawu lwethu "Umholi Wethimba Elihlanzekile" ekugcineni seludlulile ekucwaningweni kwamabhuku kukazwelonke!
Endaweni lapho ukuqashelwa kwezwe lamalungelo okuvikela ubunikazi bokusungula kuyanda, futhi kuqhutshwa yinqubomgomo yokuvikela amalungelo empahla yengqondo nokuhlonipha amalungelo empahla yengqondo, iShenzhen Beite Purification Technology Co, Ltd. iphendula ngenkuthalo kumthetho kazwelonke wokuvikela impahla, ngokuhlonipha kanye nokuvikela umthetho Isithunzi, wenze umsebenzi omuhle ekusetshenzisweni nasekuvikelweni kwezimpawu zokuhweba.
1. Uphawu lwentengiso kufanele luhambisane nelogo esesitifiketini sokubhalisa kophawu lwentengiso;
2. Umsebenzisi wangempela wophawu lokuhweba nokubhaliswa kophawu lokuhweba kuyavumelana;
3. Ukusetshenziswa kwezimpawu zokuhweba kunqunyelwe kwisilinganiso sezimpahla noma izinsizakalo ezivunyiwe.
Siyakuhalalisela futhi ngokubhaliswa ngempumelelo kophawu lwentengiso lwe- “I keep Clean”!